चाउचाउकाे लाेभ देखाएर ६ वर्षिया बालिकालार्इ बलात्कार
गुल्मी, ३० फागुन । बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–४ का १६ वर्षीय हिमाल दमाईलार्ई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
आरोपित युवकले मंगलबार दिउँसो सोही गाउँपालिका–३ की छ वर्षीया एक बालिकालाई चाउचाउ र पैसाको लोभ देखाएर बलात्कार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक डाक्टरप्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो । घरमा आएपछि बालिकाले आमासँग आफूलाई दुखेको र रगत पनि आएको बताएपछि बालिकाकी आमाले के भयो भनेर सोधपुछ गरेपछि मात्र बालिकाले घटनाबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
घटना लगत्तै आज बालिकाकी आमाले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि दर्जीलाई पक्राउ गरी सदरमुकाम ल्याइएको छ । बालिकाको घर नजिकै घर बनाउने काममा खटिएका युवक काम सकेर घर फर्कने क्रममा स्थानीय मन्दिर नजिकै खेलिरहेकी बालिकालाई बोलाएर चाउचाउको लोभ देखाउँदै बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । पीडित बालिकालाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य उपचापछि गएराति नै जिल्ला अस्पताल तम्घास ल्याइएको छ ।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ३०, २०७४१७:४३
दुई किशोरीद्वारा झुण्डिएर आत्महत्या ! एकै दिन किन, के–कति कारणले झुण्डिए भन्ने खुल्न सकेन !
एकरूपैयाँ बढी भाडा लिए मात्रै पनि पाँच हजार जरिवाना, यसरी गर्नुहोस् उजुरी !
मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा प्रहरी सहायक निरीक्षकको मृत्यु !
कृषकलाई बाल्टी उपहार !
एमाले-माओबादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताबारे रबिन्द्र मिश्रको निकै कडा अभिव्यक्ति !